Muungaab: Dib ayaan u saxeynaa howlgallada Booliska & Nabadsugidda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab: Dib ayaan u saxeynaa howlgallada Booliska & Nabadsugidda
12th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muunaagb) ayaa sheegay in muhiimadda koowaad uu siinayo amaanka gobolka Banaadir, isagoo tayeynaya booliska iyo nabadsugidda gobolka.
Gudoomiye Muungaab wuxuu tilmaamay in si howlgalka booliska iyo nabadsugidda gobolka Banaadir u noqdo mid tayo leh dedaal xoog leh uu ku bixin doono sidii ciidamadaasi u heli lahaayeen mushaar iyo qalab ku filan.
“Waxaan muhiimadda 1-aad siin doonaa aminga gobolka Banaadir, waxaana taasi u marayaa tayeynta ciidamada booliska iyo nabadsugidda, iyadoo la siinayo mushaar iyo qalab ku filan” ayuu yiri Muunaagb oo la hadlayey BBC.
Wuxuu sheegay gudoomiye Muungaab inuu qorsheynayo in 3-da bilood ee socdo isbedel amni laga dareemo magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, Muunaagb ayaa xusay in wax laga bedelayo qaab baaritaanka ay u asameeyaan booliska iyo nabadsugidda gbolka Banaadir.
“Haddii baaritaan la sameynayo waa inuu noqdaa mid hadaf leh oo lagu bartilmaameedsanayo hebel ama heblaayo oo horay nabadsugiddu warbixin uga keentay” ayuu yiri Muungaab oo tilmaamay inuu dib u saxayo howlgallada Nabadsugidda iyo booliska.
“Haaddii xaafadda la baarayo tahay mid dhaansan oo ay soo buuxiyeen kooxaha nabad diidka waa iney howlgalka hogaamiyaan dad khubaro ah” ayuu sidoo kale yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir Jen. Muungaab.
Wuxuu Muungaab adkeeyey in hadda wixii ka dambeeya ciidamada amaanku aysan ku ekaan doonin oo kaliya saldhigyada booliska ee ay degi doonaan laamaha hoos yimaada saldhigayada degmooyinka.
Isagoo kaashanaya khibradda ciidan iyo la tashi uu la yeelanayo bulshada gobolka Banaadir, ayuu Muungaab sheegay inuu dedaal ku bixinayo sidii loo nabadeyn lahaa caasimada oo ay horay wax uga qaban waayeen gudoomiyaashii ka horreeyey.
Soomaaliya oo taageero maaliyeed iyo mid milateri ka dalbatay dalalka Carabta